WasGMF4027LX bu nke ebufe igwe were gboo biyar wee gbue ya na Germany, na emela ọhụụ na teknụzụ ise. ②Setịpụ Chelsea Robot Automation (Nantong) Co., Ltd., maily na prougction nke ngwaọrụ akpaaka, CNC automation line line.
Maka ndozigharị nkekọrịta na ndepụta ọha, a na-akpọ ya Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co., Ltd. Ntọlite ​​Investa (Jiangsu) Machine Tools Co., Ltd. CMC lathe agbakwunyere n'ahịrị ngwaahịa a.
Amalitere teknụzụ sitere na Taiwan, guzobere Jiangsu Dawei Precision Technology Co., Ltd., na igwe kwụ ọtọ na-egwe ọka n'usoro ngwaahịa. Maka oge izizi, enyere ya otu n'ime "Top 30 Enterprises of in China Machine Tool Tool".
Oge mbu nke ulo ebe 4S nke Guosheng Group guzobere.
Edepụtara dị ka onye na-achịkwa otu Chinalọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ China, banyere banye n'ọzụ mmepe zuru oke gbasara ịmebe ihe eji arụ ọrụ igwe CNC dị ka azụmaahịa.
Nantong Guosheng Precision Metalmaking Co., Ltd ka a kpọgharịrị ya na Tongzhou, ma nyegharịrị Nantong Guosheng Precision Machines Co., Ltd.
Banyere n'ichepụta igwe nke igwe na-eji igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, wee mepụta mmepe mbido nke azụmahịa ngwá ọrụ CNC.
Dabere na ndọtị ụlọ ọrụ, guzobere Nantong Guosheng Foundry Co., Ltd., na-emepụta ihe nkedo n’onweghị. (Na 2018, Guosheng Foundry ka edegharịrị aha Nantong Guosheng Machine Components Co., Ltd.)
Akụrụngwa mbụ EDM nke Guosheng pụtara na Ngosipụta Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Shanghai International.
Guosheng Precision a na –eme Nrụọrụ emebere ka ọ tinye aka na azụmaahịa ụlọ ọrụ ịgbado ọkụ metal mere ka Guosheng nwee ike ịchụso izuzu na ịdị nkọ kachasị.